`ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်မှ အမြင်မတော်သော မြင်ကွင်းများ´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » `ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်မှ အမြင်မတော်သော မြင်ကွင်းများ´
`ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်မှ အမြင်မတော်သော မြင်ကွင်းများ´
Posted by winkyawaung on Mar 29, 2012 in Myanma News | 14 comments
မြန်မာပြည်မှာ နှစ်စဉ် လနှင့်ချီ၍ ရက်ရှည်ကျင်းပသော ပွဲတော်များထဲတွင် ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်လည်း ပါဝင်နေပါသည်။ အညာဒေသ၊ အပူပိုင်းတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံ လာရောက်၍ ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြပြီး မန်းချောင်ရေကို အပန်းဖြေ အနားယူရေချိုးသော တစ်နေရာဖြစ်ပါ၏။ ထို့ကြောင့် မန်းချောင်းရေအား ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ သန့်ရှင်းကြည်လင် အေးမြသာယာရေး၊ ဘုရားပွဲတော်ကျင်းပရာ မန်းချောင်းတစ်လျှောက်မှ ငါးလေးများကို ဘေးမဲ့ပေးရေးအတွက် အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်စေရအောင် အပြုသဘောဖြင့် အမြင်မတော်သော သတင်းဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
မှတ်ချက် (မည်သူ့ကိုမျှ ထိခိုက်နစ်နာစေရန် လုံးဝ (လုံးဝ)မရည်ရွယ်ပါ။)
ဘုရားဂေါပကတွေကလည်း ပွဲတော်တွင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ ဒေါ်စု ဓာတ်ပုံတွေ ပါတဲ့ တီရှပ်တွေကို လုံးဝ မရောင်းရ၊ ရောင်းရင် နောက်လာမယ့်နှစ်မှာ အဲဒီဆိုင်ဖွင့်ခွင့်နေရာ မပေးဘူးဆိုပြီး စာထွက်ထားကြောင်း မက်စင်ဂျာ သတင်းဂျာနယ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ တည်းခိုဆောင်တွေ ဈေးတစ်သိန်းထိတက်သွားတာနဲ့ ယခုလိုမန်းချောင်းရေတွေ မသန့်ရှင်းတာကိုတော့ မပြောကြဘူးဗျာ..။
စီးပွားရှာကြတာလည်းရှာကြတာပေါ့။ အကြောင်းနဲ့အကျိုး လေးတော့ဆက်စပ်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်နေကြပြီလို့ထင်တယ်နော်။
အဆိုးဆုံးက ဓါတုဆိုးဆေး တွေ ဆေးနေတာ အဆိုးဆုံး
ဒုတိယ ကတော့ အစားတလုပ်အတွက် ငါးဖမ်းနေကြတာပဲ
ကျန်တာတွေက လက်ခံလို့ရလောက်ပါတယ် အဆိုးကြီးမှ မဟုတ်တာ။
တခုတော့ အားလုံးသိအောင် ပြောချင်တာ တခု ရှိပါတယ်
ကုသိုလ်ဖြစ်စေ အကုသိုလ်ဖြစ်စေ မိမိကြောင့်ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဖြစ်ရသလို
တပါးသူကြောင့်လဲကုသိုလ်……..အကုသိုလ် ဖြစ်တာမျိုးလဲ ရှိတယ်ဆိုတာ
အမြဲ နှလုံးသွင်းထားကြစေလိုပါကြောင်း ။
ဒီလိုမျိုး သတင်းဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးပြီး များများ ဖြန့်သင့်တယ်။
ဂေါပကတွေ က မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ သွားပြီး စီစစ်နေကြတယ်။
အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းတဲ့ တလမ်းမောင်း တွေလား မသိဘူး။
လူထု အခြေပြု သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး
ပညာပေးတွေ အများကြီး အများကြီး လိုနေပါကလား…ဟရို့…
ဒီလိုလုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ခွင့်ရနေရင် ဖြစ်ချင်တိုင်းတော့ ဖြစ်တော့မယ်….။ ဘုရားဂေါပကတွေက ဒီလို ပေါ်တင်ကြီးလုပ်နေတာတောင် ဘာမှမပြောရင် လူတွေ ပိုရောင့်တက်တော့မှာပဲ။ ငါးတွေကိုတော့ လုံးဝမဖမ်းသင့်ပါဘူး။
ရှော့တိုက် ငါးဖမ်းတာနဲ့ ဓာတုဆိုးဆေးတွေ ဆေးတာကို
အော်……. သူရို့တွေ မမှတ်သေးဘဲကိုးးးးး
မသန့်ရှင်းတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရင် မနေပါဘူး… သမာဒေ၀နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေက ရေနဲ့ဆေးကြော ပေးပါလိမ့်မယ်….
ကျုပ်တို့ရွာ တောင်ပေါ်ကျောင်းရဲ့ စမ်းချောင်းထဲက
ဘုန်းကြီးဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ ငါးတွေခိုးဖမ်း ဆွမ်းဟင်းချက်ပြီး
အဲ့သည်ကျောင်းကို သွားပြန်ပို့တာ လေး အမှတ်ရမိပါရဲ့
အင်း ဒါကြောင့် မဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်လာတာ။ ရေကြီးတာတွေ လူသေတာတွေ များပြားလာတာပေါ့။ စည်းကမ်းမရှိလို့ကတော့ ရေရှည်တည်မြဲမှာမဟုတ်ဘူး။
ရှော့ရိုက်ငါးဖမ်းနေတာနဲ့ .. .ဓါတုဆေးတွေ ဆေးကြောနေတာက … အန္တရာယ်ရှိပါတယ် … ။
ငါးကိုရှော့ရိုက်ဖမ်းတာ ဗို့အားများလို့ ကိုယ်တိုင် ဓါတ်လိုက်သေရတဲ့ တံငါသည်များအကြောင်းလည်း ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲတင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်ဆိုသလိုပေါ့လေ …. ။ရှော့ရိုက်တာ .. ငါးတင်မကပဲ ..အနီးနားက ရေကူးနေသူတွေကိုပါ … သက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ် … ။ ရှော့မရိုက်ပဲ ပိုက်ကွန်နဲ့ ဖမ်းတာလည်း … ဘုရားနယ်နိမိတ်အနီးနားမှာ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး … ။
ဓါတုဆေးတွေချောင်းထဲပစ်တာတို့ ၊ အိုးခွက်ပန်းကန်တို့၊ သနပ်ခါးတုံးတို့ ဆေးတာတွေကြောင့်လည်း ချောင်းရေ ညစ်ညမ်းစေနိုင်ပါတယ် … ။ ဒါတွေကို ချောင်းနားနေ မိသားစုတွေ သဘောပေါက် လိုက်နာဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေ လမ်းညွှန်ပေးသင့်ပါတယ် … ။
မလုပ်သင့်တဲ့ အရပ်မှာ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်နေကြတာကိုး။